မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: 06/01/2010 - 07/01/2010
Posted by mabaydar at 8:57 PM2comments :
Posted by mabaydar at 12:29 PM5comments :
သူ့မြန်မာနာမည် ကျော်ထိုက်စံ လို့ youtube ပေါ်က ဗွီဒီယိုတင်ထားသူက ပြောသောကြောင့် အဲလိုထင်ခဲ့ပင်မဲ့ နောက်ပိုင်း နည်းနည်းသံသယရှိတာကြောင့် ဒုတိယပိုစ့်မှာ မသေချာပါ... သိသောသူရှိရင် ပြောပြလို့ရအောင် ရေးထားခဲ့ပါတယ်... ဟိုတစ်လောက ဆီဘောက်စ်မှာ ဘာမှ မသိရင်လဲ မရေးနဲ့ပေါ့လို့ မှတ်ချက်ပေးသွားတုံးကလဲ မဗေဒါရဲ့ သဘောထားကို ပြန်လည်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်...
ဒါပေမဲ့ စိတ်ထဲမှာ အမှန်တကယ်သိချင်စိတ်ဖြစ်နေမိပါတယ်... သိခဲ့တဲ့ သတင်းအချက်အလက်လေးကို လဲ မျှချင်ပါတယ်...
ဒီလိုနဲ့ပဲ ကြိုးစားရင်း ခိုင်လုံတဲ့ သတင်းရပ်ကွက်ကနေ သိခဲ့ရပါတယ်...
အဲဒါကတော့ သူ့မြန်မာနာမည်က ကျော်ထိုက်စံ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့... သူ့ တရုတ်နာမည်ကသာ ကျောက်ထိုက်ရှန် ပါတဲ့... မြန်မာနာမည်က ဘာလဲဆိုတော့ အက်ဂါ (Edgar) လို့ပဲ သိရပါတယ်... နာမည်အရင်းကတော့ မသိပါဘူး... သိဖို့လဲ မလိုအပ်ဖူးထင်ပါတယ်... သူက ရှမ်းပြည် ကျိုင်းတုံ အလွန်က ကွမ်းလုံ ဆိုတဲ့ မြို့ကပါ... သူ့ မွေးနေ့က August 9, 1981 ပါ... မြန်မာပြည်မှာ စီးရီး ၂ခွေ ထုတ်ဖူးပင်မဲ့ သိပ်ရောင်းအား မကောင်းခဲ့ပါဘူး... ဒုတိယ စီးရီးကတောင် လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်လောက်ကတည်းက ထုတ်ခဲ့တာဆိုတော့ ပြန်လိုက်ရှာဖို့ကတော့ ခက်မယ်ထင်ပါတယ်... ထိုင်ဝမ်ကို ရောက်တာ မကြာသေးခင်မှာပဲ super Idol ရှိတယ်ဆိုတာ ကြားလို့ ၀ါသနာအရ သွားပြိုင်ခဲ့ပါတယ်... သူ မြန်မာပြည်မှာ မအောင်မြင်ပဲ ထိုင်ဝမ်မှာ လူသိများ အောင်မြင်ခဲ့တာကိုလဲ နားမလည်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်... ထိုင်ဝမ် စူပါ အိုင်ဒိုးက လူထောင်ပေါင်းများစွာမှာ အမြင့်ဆုံး ၉ယောက်အထိ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်... မြန်မာပြည်နဲ့ မြန်မာလူမျိုးကို ချစ်လို့ သူမြန်မာဆိုတာကို အမြဲတမ်း ၀ံ့ကြွားစွာ ထည့်ထည့်ပြောလေ့ရှိပါတယ်တဲ့... သူဟာခုဆိုရင် ထိုင်ဝမ်က talent agency တစ်ခုနဲ့ စာချုပ်ချုပ်ထားပြီးပါပြီ... စီးရီးထွက်ဖို့တော့ လက်တလောမှာ မရှိသေးပါဘူးတဲ့... ခုလောလောဆယ်မှာတော့ talent Agency များရဲ့ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်အတိုင်း သူ့ရဲ့ အနုပညာလမ်းကြောင်းကို သူတို့ကပဲ အားလုံး ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်... သူ့ Agency က သူ့ကို အောင်မြင်တဲ့ အနုပညာသမားတစ်ယောက် အဖြစ် ကောင်းစွာ မြေထောင်မြှောက်ပေးဖို့ ဆုတောင်းမိပါတယ်...
ဒီနေ့ ညနေ ၃နာရီ ထိုင်ဝမ်မှာ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး fan Meeting ရှိပါတယ်... သူ့ ပရိတ်သတ်တွေအတွက် လက်ဆောင်တွေ ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့လဲ သိရပါတယ်... လောလောဆယ်တော့ ကျွန်မသိတာ ဒီလောက်ပါပဲ... သူငယ်ချင်းတို့ရော ဘာသိချင်သေးလဲ... အတတ်နိုင်ဆုံး မဗေဒါ ရှာဖွေ မေးမြန်းကြည့်ပေးမယ်... ထိုင်ဝမ်မှာ တောက်ပနေတဲ့ မြန်မာပြည်က ကြယ်ပွင့်လေး ဆက်လက်တောက်ပ နိုင်ပါစေလို့ ကျွန်မ စကာင်္ပူက ပရိတ်သတ် မဗေဒါက ဆုတောင်းနေပါတယ်... အစဉ်အမြဲလဲ အားပေးလျက်ပါ...
Ugly Truth : ကြည့်ရတာ သူ့ ကွန်ပြူတာမှာ မြန်မာ ဖောင့်မရှိပါဘူး... သူ့ ဖေ့ဘွတ်မှာ မြန်မာလိုသွားရေးပြီး ပြောရင် သူမြင်ရတယ် မထင်ပါဘူး... သူ့အနီးနားက တစ်ယောက်ယောက် သူ့ကွန်ပြူတာကို မြန်မာဖောင့်လေး Install လုပ်ပေးရင် သိပ်ကို ကျေးဇူးတင်မိမှာပါပဲ...
Posted by mabaydar at 3:27 AM 12 comments :
ကဲ... လာလေရော့ဟဲ နောက်အပိုင်း တစ်ပိုင်း...
"အမလေး တစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းထွက်ဖို့ မဗေဒါတို့များ အတော်စောင့်ရတယ်"ဆိုပြီးများ စိတ်ပျက်နေကြပြီလားဟင်... မဗေဒါလဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အတော်လေး အားမရဖြစ်ရပါတယ်... အမှန်တော့ ရေးမယ်လုပ်လိုက်... ကိုယ်ရေးထားတာကို စိတ်တိုင်းမကျဖြစ်လိုက်... ပြန်ဖျက်လိုက်... ပြီး ပြန်စရေးလိုက်... ပြန်ဖတ်ကြည့်တော့ စိတ်တိုင်းမကျလိုက်ဖြစ်နေတာပါ... ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပဲ ယုံကြည်မှုမရှိတာလားတော့ မသိဘူး... ကိုယ့်စာကိုယ်တောင် ပြန်ဖတ်ချင်စိတ်မရှိရင် ပရိတ်သတ်ကိုလဲ ဘယ်ဆွဲဆောင်နိုင်ပါ့မလဲနော်... ခုတော့ ပရိတ်သတ်ကလဲ အရမ်းတောင်းဆိုနေကြတယ်... စောင့်ရတာလဲ အတော်ကြာနေပြီဆိုတော့ ရှိသမျှအကုန်ထုတ်ပြီး ဒီအပိုင်းကို ရေးလိုက်ပါတယ်... မနေ့ကတင်မယ်လို့ ဖေ့ဘွတ်မှာ အော်ထားပြီးမှ... ညနေက ရေးနေရင်း ခါးတွေနာပြီး မျက်လုံးတွေ ကိုက်... ခေါင်းတွေမူးလာလို့ ခဏလှဲလိုက်တာ အိပ်ပျော်သွားတယ် (ကိုယ့်ဘာကိုယ် ပျင်းတာကို... ဆင်ခြေပေးတာ)... ခု မနက် ၄နာရီကြီး ပြန်နိုးပြီး အမြန် လက်စသတ်ပြီး ဒီအပိုင်းကို တင်လိုက်ပါပြီ... ဆက်ပြီး ရှည်ရှည်ရေးပြီးမှ တင်ချင်ပါတယ်... ဒါပေမဲ့ ဆက်ရေးနေရင် ဆက်ကြာနေအုံးမယ်... ဘယ်လောက်ကြာနေအုံးမယ်ဆိုတာ မသိဘူးလေ... ဒီတော့ ရှိသလောက်လေး အရင်တင်လိုက်ပါတယ်... ဒီဝတ္တုကို မျှော်နေကြမှန်းသိလို့... ကိုယ်ကလဲ မရေးနိုင်လို့ အားနာပြီး ကိုယ်ရေးချင်တာတွေရှိတာတောင် တမင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် အပြစ်ပေးပြီး မရေးဘူး...
ကျွန်မရဲ့ ၀တ္တုအပိုင်းလေးတွေက တိုတယ်ဆိုပြီး အားမလိုအားမရနဲ့ Feedback ပေးကြတဲ့ စာဖတ်သူတွေကိုလဲ အားနာလှပါတယ်... ခုလို Feedback ပေးလို့လဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်... နောက် အတတ်နိုင်ဆုံး ရှည်အောင်ရေးပါ့မယ်... ကိုယ့်ကိုကိုယ်လဲ သိပါတယ်... ခု ကျွန်မရေးထားသလောက်အထိတောင်မှ ဇာတ်လမ်းတွဲသာရိုက်မယ်ဆိုရင် episode ၁ခုစာတောင် မရှိသေးပါဘူး... စိတ်ထဲပေါ်သမျှ ကို ဇာတ်လမ်းဆင်ပြီး ရေးထားတာကို ခုလို စောင့်ဖတ်နေတဲ့ ပရိတ်သတ်ရှိနေတယ်ဆိုတာ သိရတော့ အများကြီး ၀မ်းသာပါတယ်... ဖေ့ဘွတ်ကနေ မတ်ဆေ့တွေပို့ပြီး အားပေးတဲ့ စာဖတ်သူများကြောင့်လဲ မဗေဒါ စာဆက်ရေးဖို့ အားရှိခဲ့ပါတယ်... အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
မဗေဒါ ၀တ္တုကိုဖတ်ပြီး ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာလေးကို ပြန်ပြောပြကြရင် ကောင်းမယ်ထင်တယ်... ဒါမှ မဗေဒါလဲ ကိုယ့်ဝတ္တုက စာဖတ်သူအပေါ်ဘယ်လောက်သက်ရောက်လဲဆိုတာ သိနိုင်မှာပါ... ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကျတော့ ဘယ်လိုထင်ရမှန်းမသိဘူးလေ... ကိုယ့်ကိုကိုယ် အထင်မကြီးဘူးပေါ့... အိမ်သားတွေပြောရင်လဲ အချင်ချင်းကျတော့ အမှန်ထွက်မှာမဟုတ်ဘူး... အမှန်ပြောလဲ လက်မခံချင်ဘူး... စာဖတ်သူ ပြောတာက အမှန်ဆုံးပဲလေ... ဟောဒီမှာတော့ အရင် အပိုင်းလင်ခ့်တွေကို ပေးလိုက်ပါတယ်... sidebar က အခန်းဆက်ဝတ္တုဆိုတာကို နှိပ်ပြီးတော့လဲ ရေးထားသမျှတွေကို သွားနိုင်ပါတယ်... ဒါမှမဟုတ် ဒီလင်ခ့်တွေကနေလဲ သွားနိုင်ပါတယ်... ရှေ့အပိုင်း မဖတ်ရသေးသူတွေအတွက်...
ဖူးစာစုံလို့ ရင်ခုန်ခဲ့ပါလျှင် အပိုင်း (၁)
ဖူးစာစုံလို့ ရင်ခုန်ခဲ့ပါလျှင် အပိုင်း (၂)
ဖူးစာစုံလို့ ရင်ခုန်ခဲ့ပါလျှင် အပိုင်း (၃)
နောက်ပြီး... နောက်ဆုံး အပိုဒ်ကို ရေးတုန်းက မဗေဒါ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်းရဲ့ ချစ်ခဲ့တာလား ရူးခဲ့တာလား သီချင်းလေးကို နားထောင်ပြီး ရေးဖြစ်ပါတယ်... ဖတ်တဲ့သူများလဲ အာရုံ ၂ခုလုပ်လေ့ရှိတယ်ဆိုရင် ဒီသီချင်းလေး နားထောင်ရင်း ဖတ်နိုင်ပါတယ်... Play tagger နဲ့ တင်မလို့ပါပဲ... လုပ်လို့မရတာနဲ့ Youtube ကပဲတင်လိုက်ပါတယ်... ရုပ်ရှင်ထဲမှာဆိုရင်တော့ မင်းသမီး ဆွေးတဲ့အခန်းကို ဒီသီချင်းနဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းသုံးပြီး ပြဖြစ်မယ်ထင်တယ်... ဟဲ... ဟဲ...
Posted by mabaydar at 6:21 AM4comments :
Posted by mabaydar at 3:51 AM6comments :
Posted by mabaydar at 3:46 AM9comments :
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ရက်လောက်ကမှ ဂျန်ဂမ်ဆပ်ရဲ့နောက်ဆုံးဗွီဒီယိုကို Youtube မှာ upload လုပ်ရင်း မတော်တဆတွေ့လိုက်တဲ့ ထိုင်ဝမ် စူပါအိုင်ဒိုးပြိုင်ပွဲက မြန်မာ အဆိုတော်ကို အတော်လေး ကျွန်မသဘောကျနေပါတယ်... အစကတော့ ဒီအကြောင်းကို ဘလော့ပေါ်မရေးတော့ပါဘူးလို့ စိတ်ကူးမိပင်မဲ့... တခြားနိုင်ငံက မင်းသားတွေကို ကိုယ်ကြိုက်ရင် ဝေငှနေသေးတာ... ခုလို ကိုယ့်လူမျိုး အရည်အချင်းရှိ talent ရှိတဲ့သူကိုလဲ လူသိအောင် ဝေမျှ အသိပေးသင့်တယ်လို့ထင်တယ်လေ... တွေ့တွေ့ချင်းကတော့ facebook မှာ လင့်ခ်တင်လိုက်သေးတယ်... ကျွန်မ facebook ထဲမှာ ရှိတဲ့သူတွေတော့ သိပြီးဖြစ်မှာပါ...
သူက ထိုင်ဝမ် စူပါအိုင်ဒိုးကို ၀င်ပြိုင်တာမှာ ထိပ်ဆုံး အဆင့် ၉ယောက်အထိ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်... ပထမဆုံး audition ၀င်တဲ့ နေ့ကတည်းကလဲ သူဟာ မြန်မာပြည်ကလာတဲ့ မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ကြောင်းကို ပြောခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်... မြန်မာသီချင်း "မင်းနဲ့မှ ချစ်တတ်ပြီပေါ့" ကိုတောင် ပထမဆုံး Audition မှာ ဆိုပြခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်... သူတို့ ထိုင်ဝမ် အိုင်ဒိုးက အမေရိကန်အိုင်ဒိုးလို နောက်ပိုင်းမှာ ပရိတ်သတ်မဲနဲ့သွားလား ဒိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပဲ သွားလားတော့ ကျွန်မလဲ သေချာမသိပါဘူး... ဒါပေမဲ့ မြန်မာလူမျိုးဆိုတာနဲ့တင် ထိုင်ဝမ်အိုင်ဒိုး နံပါတ်တစ်ဖြစ်ဖို့ကတော့ သိပ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သိပါတယ်... ဒါက ကျွန်မရဲ့ အထင်ကို အရိုးသားဆုံး ပြောကြည့်တာပါ... ဒါတောင် သူက Top9အထိပါခဲ့တယ်ဆိုတာ သူ့ရဲ့ အရည်အချင်းက အတော်လေး မသေးလို့ပါ...
ကဲဒါဆို သူ့ performance တွေကို ကျွန်မ စိတ်ဝင်စားလာတာနဲ့ ကြည့်လိုက်ပါတယ်... နံပါတ်၉ အထိရောက်တာလဲ ရောက်လောက်ပါတယ်... အတော်လေး အသံကောင်းပါတယ်... ဒါတောင် ကျွန်မနားမလည်တဲ့ တရုတ်သီချင်းဆိုနေတာနော်... သီချင်းဆိုနေတုန်းလုပ်တဲ့ ဟန်ပန် အမူအရာနဲ့ ၀တ်ပုံစားပုံ အပြင်အဆင်လဲ ဘာမှ သိပ်ပြောစရာမရှိပါဘူး... ရုပ်ရည်လဲ မဆိုးပါဘူး ခန္ဓာကိုယ် အရပ်အမောင်းကအစတော့ အာရှက တခြားနိုင်ငံက Celeb တွေနဲ့ အတန်းမှီပါတယ်... ဒါတင်မကပါဘူး သူက တစ်ချို့သီချင်းတွေမှာ က တာလဲ တွေ့ရပါတယ်... က တာလဲ မဆိုးပါဘူး... Moon Walk လျှောက်တာဆိုရင် နောက်က Dancers တွေထက်တောင် သူလျှောက်တာက ပိုလှပါသေးတယ်... ဒါတော့ တကယ်ချီးကျူးပါတယ်...
ကျွန်မရဲ့ Personal Taste အရတော့ တစ်ချို့သီချင်းတွေမှာလုပ်ထားတဲ့ သူ့ ဆံပင်ပုံစံကို သိပ်မကြိုက်ပါဘူး... သူ့ကိုကြည့်ရတာ ဆံပင်ပါးပုံရပါတယ်... သူပထမဆုံး Audit ၀င်တုန်းကပုံမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်... ဒီတော့ ဆံပင်ပုံက ရွေးမှာပါ... အောက်က ဗွီဒီယိုထဲက 0:53 ဂျာ့ကင်အဖြူလေးနဲ့ ဆံပင်အလန်လေးလဲ မဆိုးပါဘူး... အဲဒိဆံပင်နဲ့ သဘောကျတယ်... ငယ်တယ်လဲထင်ရတယ်... (အသက်တော့ ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ မသိပါ)... ဒါကလဲ ဒီလို အနုပညာလိုင်းထဲဝင်ရင် စတိုင်တစ်မျိုးတည်းနေတာထကစာရင် အမျိုးမျိုးပြောင်းနေနိုင်ရမယ်ဆိုတော့ လက်ခံလို့ရပါတယ်... အောက်က ဗွီဒီယိုကတော့ သူ eliminate လုပ်ခံရတဲ့ နေ့မှာ ပြတဲ့ ဗွီဒီယို ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်...
ဒီမှာ မိတ်ကပ်ဟာ ခုလို show bis က လူတွေအတွက် ဘယ်လောက်အရေးကြီးသလဲဆိုတာကိုလဲ တွေ့နိုင်ပါတယ်... သူ ပထမဆုံး Audit ၀င်တဲ့ ပုံနဲ့ နောက်ပိုင်း စင်ပေါ်မှာ ဆိုတဲ့ ပုံက အကွာကြီးပါ... စင်ပေါ်မှာ သူ့ပုံက တကယ့်ကို star တစ်ယောက်နဲ့ တူပါတယ်... အသားအရေ ဆံပင် မျက်နှာ အနေအထား အားလုံးက နာမည်ကျော်တစ်ယောက်ရဲ့ လက္ခဏာတွေဖြစ်နေပါတယ်... သူ့ကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့ Smart ကျပြီး Cool ဖြစ်နေတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်... အဲဒါဟာ မိတ်ကပ် ၀တ်စားပြင်ဆင်ပုံ အားကောင်းလာလို့ပါ... ယောင်္ကျားမို့ မိတ်ကပ်လိမ်းစရာမလိုပါဘူး အခြောက်မှ မဟုတ်တာ ဆိုတဲ့ ခေတ်က ကျန်ခဲ့ပါပြီ... ကျွန်မပြောတာ Show Bis ကို ပြောတာနော်.. အပြင်က သာမာန်လူတွေကို ပြောတာမဟုတ်ဘူး... show bis ထဲ ၀င်ချင်တဲ့ ယောကျာင်္းကိုပြောတာ... ခုအခါမှာ မိတ်ကပ်နည်းပညာတွေ အဆင့်အတန်း အရမ်းမြင့်မားလာတဲ့အတွက်အကြောင့် ယောကျာင်္းလဲ ယောကျာင်္းအလျောက် သင့်တော်တဲ့ မိတ်ကပ်တွေရှိနေပါပြီ....
သူ့ကို တစ်ချို့တွေက မြန်မာသီချင်းဆိုတာ ကြားချင်တယ်... မြန်မာစကားရော ပြောတတ်ရဲ့လားလို့ မေးသူတွေအတွက်ကတော့ ၂၀၁၀ ထိုင်ဝမ်မှာ ကျင်းပတဲ့ မြန်မာ သင်္ကြန်မှာ နွေမ သီချင်းနဲ့ ပါဝင်ဖျော်ဖြေခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်...
ကျွန်မအနေနဲ့ ပြောရရင်တော့ သူ့အသံက နဂိုကောင်းပါ... ဘာဆိုဆိုကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ မြန်မာသီချင်းထက် တရုတ်သီချင်းဆိုတာ ပိုကောင်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ်... သူ့အသံနဲ့လဲ ပိုလိုက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်... သူ့အသံနဲ့လိုက်တဲ့ မြန်မာသီချင်းတွေလဲ ရှိမှာပါ... မြန်မာပြည်မှာ စီးရီး ၂ခွေထုတ်ပြီးပြီလို့ အဲဒိဗွီဒီယိုကို Youtube မှာတင်ထားတဲ့သူက ပြောပါတယ်... ဒါဆိုရင် ဘာနာမည်နဲ့လဲ စီးရီးနာမည်ကရောဘာလဲ... ကျွန်မ မူရင်းကို တန်ရာတန်ကြေးပေးပြီး ၀ယ်ယူအားပေးချင်ပါတယ်...
တကယ်လို့များ ကျွန်မဘလော့ကို ထိုင်ဝမ်က သူနဲ့ သိတဲ့သူတစ်ယောက်ယောက်ပဲ လာဖတ်သည်ဖြစ်စေ... သူကိုယ်တိုင်ပဲ မျက်စိလည်လမ်းမှားပြီးဖတ်မိသည်ဖြစ်စေ ဖတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ သူ့ကို အကြံပေးလိုတာလေး တစ်ခုရှိပါတယ်... မြန်မာပြည်ရဲ့ ယခုလို အနုပညာ အဆင့်အတန်း တစ်ဖြည်းဖြည်းယုတ်လျော့လာနေတဲ့ နိုင်ငံမှာ အရင်ခြေလှမ်းစမဲ့အစား... ခု ထိုင်ဝမ်မှာ အဆင့်အတန်းနေရာ တစ်နေရာရနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒိမှာပဲ တေးရေးကောင်းကောင်းနဲ့ ကိုယ်ပိုင်တရုတ်သီချင်းခွေထုတ်ပြီး အဲဒိက ဈေးကွက်ကို အရင်တိုးစေချင်တယ်... အဲဒိမှာ နာမည်ကြီးရင် အလိုလိုနေရင်း Asia က တရုတ်စကားပြောနိုင်ငံတော်တော်များများမှာ နာမည်ကြီးတာနဲ့ အတူတူပဲဖြစ်မှာပါ... ဥပမာ စကာင်္ပူက Stephine Sun တို့ဘာတို့ဆို စကာင်္ပူလို အနုပညာ သိပ်မထွန်းပေါက်တဲ့ နိုင်ငံကမတိုးပဲ ထိုင်ဝမ်တို့ ဟောင်ကောင်တို့ ဈေးကွက်ကို တိုးပေါက်သွားတဲ့အတွက် စကာင်္ပူရဲ့ ဖူးဖူးမှုတ် celebrities တစ်ယောက်ဖြစ်နေတာပါပဲ... နောက်တစ်ယောက်က မလေးရှားက Michelle Yeoh (Crouching Tiger hidden dragon, Geisha) ဆိုရင်လဲ သူ့နိုင်ငံ မလေးရှားကနေ စမဖောက်ပဲ ဟောင်ကောင်ဈေးကွက်မှာ နာမည်ကျော်ပြီး ခုဆို ကမ္ဘာကျော် အက်ရှင် အမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်တောင် ဖြစ်နေပါပြီ... ကျွန်မအခုလို အကြံပေးတာတောင် နောက်ကျရင် နောက်ကျနေမှာပါ... ခုလောက်ဆိုရင်တောင် လုပ်ရင်လုပ်နေလောက်ပါပြီ... တကယ်လို့ ခွေထွက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်လဲ အားပေးဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ... အင်ဖိုလေးသာ သိရဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်... လောလောဆယ်ထိတော့ ဂူဂဲလ်မှာ Tai-Shan Zhoug လို့ ရှာရှာ ကျော်ထိုက်စံလိုရှာရှာ ဘာ အင်ဖိုမှ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် မတွေ့သေးပါဘူး... facebook မှာလဲ မတွေ့ပါဘူး... အဲဒိအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်... အဲဒါကြောင့်လဲ ဒီပိုစ့်ကို ရေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ...
မြန်မာလို့ပြောလိုက်ရင် တချို့က သနားတဲ့ အကြည့်တွေနဲ့ တချို့က ကြောက်တဲ့ အကြည့်တွေနဲ့ တချို့က နှိမ်ချင်တဲ့ လေသံတွေနဲ့ ပြန်လည်တုန့်ပြန်တတ်ကြတဲ့ တခြားနိုင်ငံသားတွေ အလယ်မှာ သူမြန်မာပြည်ကလာတယ်ဆိုတာကို ဂုဏ်ယူစွာပြောခဲ့တဲ့ ကျော်ထိုက်စံဆိုတဲ့ ကြယ်တစ်ပွင့်ကတော့ ထိုင်ဝမ်မှာ လင်းလက်ခဲ့ပါပြီ... ဒီတော့ ကျွန်မတို့ အနေနဲ့ကလဲ အရည်အချင်းရှိတဲ့ မြန်မာပြည်က ဒီကြယ်ပွင့်လေး ဆက်လက် တောက်ပနိုင်အောင် ၀ိုင်းဝန်းကူလို့ အားပေးသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်... ဘယ်သူ အားပေးပေး မပေးပေး ကျွန်မကတော့ သူ့ကို စတွေ့တဲ့နေကစပြီး အားပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်...
(တကယ်လို့များ သူသိနိုင်မယ်ဆိုရင် သူ့ ဓာတ်ပုံနဲ့ သူ့ Autograph ကိုယ်တိုင်ထိုးထားတဲ့ သူ့ CD ကို သူ့ဆီကနေ တိုက်ရိုက် Purchase လုပ်ချင်ပါတယ်)
P.S ကျွန်မရဲ့ ဘာမှ မရှိတဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ ထင်ရာများကိုသာ သုံးသပ်အကြံပေးထားတဲ့အတွက် ကြိုက်သလို သဘောထားကွဲလွဲနိုင်ကြပါတယ်....
Posted by mabaydar at 3:22 AM 14 comments :
Posted by mabaydar at 5:43 AM 13 comments :